उन्माद त्याग, जनादेशको मर्म बुझ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
उन्माद त्याग, जनादेशको मर्म बुझ
फागुन २८, २०७७ शुक्रबार ८:५२:१५ | हरि ज्ञवाली
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक पार्टीको आधिकारिकता दिने फैसला गरेसँगै वर्तमान सरकार र ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अस्तित्व एकैपटक सङ्कटमा परेको छ । एउटा पार्टी पूर्ववत् दुई पार्टीका रूपमा परिणत भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका अहिलेका दुई वटा फैसलाले नेपालका कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई जनादेशकोे भावनाअनुरूप चल्न र मनोमानीरूपमा उच्छृङ्खल नबन्न पनि आदेश दिएको छ । पार्टी एकता नै गर्ने भए नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न र आफ्ना उन्मादपूर्ण गतिविधि र सोचमा परिवर्तन गर्नसमेत सन्देश दिएको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि संसदमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले र तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते अचानक पार्टी एकीकरण घोषणा भएको थियो । छापामार शैलीमा गरिएको पार्टी एकताले न त नेतृत्वपङ्क्ति नै खुशी देखिन्थे न त कार्यकर्तामा कुनै उत्साह नै।
फलस्वरूप सबै तहका सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टीमार्फत् जनतामा सम्प्रेषण हुन सकेन । पार्टीगत प्रशिक्षण, भेला, बैठक, सम्मेलन, अधिवेशन नहुँदा जनतामा नेकपाको राजनीति नै पुग्न सकेन।
एकीकरणपश्चात् शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको अहमता, घेराबन्दी, षड्यन्त्रका तानाबाना, एक/अर्काविरूद्धका गाली, सत्तोसराप, संवेदनहीनता र अदूरदर्शीताले कुनै पनि कोणबाट नेकपा राजनीतिक पार्टीजस्तो देखिएन । सत्ता प्राप्ति र पदीय छिनाझपटीका अस्वस्थ खेलमा तल्लोस्तरमै उत्रिएर नेताहरूले तमासा देखाइरहे ।
जनताले त्यत्रो विश्वास र समर्थन गरेर सिंहदरबारको सिंहासनमा पुर्याएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा देखिएको अराजक शैलीले कम्युनिस्टहरूलाई मात्र कलङ्कित र आलोचित बनाएको छैन । अपितु, देश को विकास, समृद्धि र संस्कारमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यो गलत संस्कृति र विरासत अब कसरी सकारात्मक दिशातर्फ परिवर्तन हुन्छ ? पार्टीका आउँदाे गतिविधिले नै निर्धारण गर्नेछन् ।
तर त्याे नाम आफूले २०७० साउन २२ गते आयोगमा दर्ता गराएको र आफ्नो दलसँग मिलेकाले खारेज गर्न माग राखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले उतिबेला नै उजुरी दिए पनि निर्वाचन आयोगले २०७५ कात्तिक ९ मा कट्टेलको उजुरी खारेज गरिदियो । आयोगबाट न्याय नपाएपछि उनी सर्वाेच्च अदालतमा पुगे ।
निर्वाचन आयोगले दुई तिहाइ वाला सरकारको दबाबमा परेर आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई तिलाञ्जली दिएको अनि कानुन मिचेर निर्णय गरेको थियो भन्ने पुष्टि यतिबेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरिदिएको छ। तत्कालीन अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक धर्म निर्वाह गरिदिएको भए नेकपामा यसबेला यो सङ्कट आउने थिएन । त्यसैले निर्वाचन आयोगको नियत, कार्यशैली र निष्पक्ष भूमिकाप्रति थुप्रै प्रश्न त उठेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूबीच फगत सत्ताप्राप्तिका लागि अनेक अस्वस्थ खालका दाउपेच चलिरहन्छ । उनीहरू कतिपय बेला एकआपसमा विवाद गर्छन् । झगडा मच्चाउँछन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई उपयोग वा दुरूपयोग गर्दै एक/अर्काविरूद्ध उचाल्छन् । तथानाम सत्तोसराप वा आरोप लगाएर एक/अर्कालाई खुइल्याउँछन् । सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धामा उनीहरू अर्काे पार्टीलाई निषेध गर्न पछि पर्दैनन् ।
स्वार्थ मिले अचानक अङ्कमाल गर्न पनि उनीहरू तयार हुन्छन् । यो उनीहरूको एकखालको विशेषता र राजनीतिक अभीष्ट नै हो । तर, देश का संवैधानिक निकायहरूले उनीहरूका गलत प्रवत्ति, क्रियाकलाप र गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी संवैधानिक र कानुनी दायरामा समेट्नुपर्ने हुन्छ । मार्गनिर्देश गरी सहजीकरण गर्नु जरूरी हुन्छ । देशलाई अस्थिर बनाउने र सङ्कट निम्त्याउने खेलमा संवैधानिक आयोगको त्रुटि नै सहयोगी बन्छ भने त्यो दुःखको कुरा हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयलाई बदर गरिदियो । संसदमा विकल्प हुँदाहुँदै पनि बदनियत तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिदियो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै अबको सत्ता समीकरण, संसद् र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन नेकपाको आधिकारिकताको लडाइँ अर्को मोडमा प्रवेश गरेको छ । फैसलाले सरकार, निर्वाचन आयोग, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा, सम्बन्धित दल, त्यस दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैका अगाडि नयाँ जटिलता र सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ । सम्भावना र जटिलता दुवैको उपयुक्त समाधान कसरी हुन्छ ? त्यसका लागि त समय नै कुर्नुपर्ने छ ।
दुवै पार्टीको अबको यात्रा थप सकसपूर्ण नबन्ला भन्न सकिन्न । तीन वर्षयता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नामबाट अभ्यास गरिरहेको र पछिल्लो समय विभाजित अवस्थामा पुगेको त्यस दलमाआबद्ध नेताहरूलाई साबिककै अवस्थामा पुर्याउनु त्यति सहज नभए पनि गाह्रो भने देखिँदैन  ।
वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(१) बाट अब संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको गठबन्धन सरकारमा स्वतः रूपान्तरण भएको छ । सत्तारूढ दलले नेकपाको हैसियत गुमाएसँगै संसद्को शक्ति सन्तुलनसमेत बदलिएको छ । अब संसद्को गणितमा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, र जसपाका ३५ सांसद छन् । अन्य एक/एक सदस्य भएको पार्टीको अस्तित्व बेग्लै छ ।
कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थन प्राप्त भयो भने अर्को सरकार बन्ला । तर जे भए पनि देश मा अस्थिरता बढ्छ कि भन्ने आशङ्का र चिन्ता दुवै बढेका छन् । जनादेशको मर्म अस्थिरता होइन । बरू केपी ओलीको नेतृत्वमा पाँच वर्षे कम्युनिस्टको सरकार नै जनादेशको भावना र चाहना दुवै हो ।